ब्रेकिङ न्युज: पिएनबाट हराएको आईडी कार्ड ‘क्रान्तिकारी नेता’ बस्ने घरमा | Rastra News
रञ्जन अधिकारी पोखरा, १९ फागुन / पृथ्वीनारायण क्याम्पसबाट हराएको विद्यार्थी परिचयपत्र भेटिएको छ । गत फागुन १४ गते शनिबार राति क्याम्पसको विज्ञान संकाय प्रशासन कार्यालको ताला फोडी विद्यार्थीको आईडी कार्ड चोरी भएको भनिएको थियो । सो कार्ड पोखरा ११ तुल्सीमार्ग स्थित एक घरमा विहिबार भेटिएको हो । प्रहरीले सूचनाका आधारमा एक सय ५९ वडा कार्ड नियन्त्रणमा लिएको छ ।
कार्ड चोरी भएको भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्र निकट अखिल (क्रान्तिकारी) ले फागुन १८ गते निर्धारित स्ववियु चुनाव नै स्थगन हुने गरी क्याम्पसमा तालाबन्दी गरेको थियो । कार्ड भेटिएको घरको बीच तल्लामा अखिल क्रान्तिकारीकै नेता भाडामा बस्दै आएका छन् । विज्ञान संकायका विद्यार्थीका पाँच सय बढि आईडीकार्ड हराएको दाबी गर्दै क्रान्तिकारीले कार्ड नभेटिएसम्म चुनाव हुन नदिने अडान राखेपनि अन्ततः सहमतिमा आएपछि यही फागुन २५ गते चुनावको मिति तोकिसकिएको छ ।
यसरी भेटियो कार्ड
तुल्सीमार्ग स्थित निरञ्जन रञ्जितको घरको भुईंतल्लाको भ¥याङमुनी कार्ड भेटियो । विहिबार साँझ करीब ६ बजेतिर सोहि घरको अघिल्लो सटरमा चाउचाउ गोदामको गाडीमा काम गर्ने एक चालक भ¥याङमुनी चाउचाउको कार्टुन खोज्दै गए । उनले प्लाष्टिकको पोकामा कार्ड फेला पारे । घर अगाडि चटपट बेचेर बस्ने महिलालाई चटपट खान ‘बलियो चम्चा हुने भो’ भन्दै पोको बोकेर निस्किए । १२ वर्षीय एक किशोरले पिएन क्याम्पसको आईडी कार्ड रहेछ भनेपछि स्थानीयले प्रहरीलाई खबर गरे ।
सूचना प्राप्त हुनासाथ जिल्ला प्रहरी कार्यालय र वडा प्रहरी कार्यालय बगरको संयुक्त टोली घटनास्थल पुग्यो । राति ११ बजेमात्रै मुचुल्का उठाएर प्रहरी टोली फक्र्यों । प्लाष्टिकमा करीब दर्जन समूहमा छुट्याएर राखिएको कार्ड गन्दा एक सय ५९ मात्रै भेटियो ।
सो घरमा घरधनी बस्दैनन् । छिमेकीका अनुसार घरको बीच तल्लामा अखिल क्रान्तिकारीका पृथ्वीनारायण क्याम्पस जिल्ला समिति ईञ्चार्ज क्षितिज सापकोटा स–परिवार बस्छन् । ‘खोई हामी एक अर्कालाई चिन्दैनौं तर यो घरमा माओवादीका विद्यार्थी नेता बस्छन् । पिएन क्याम्पससँग जोडिने मान्छे यो घरमा अरु छैनन् ।’ – नाम नखुलाउने शर्तमा ति छिमेकीको भनाई थियो । यद्यपी, प्रहरीले मुचुल्का उठाएर कार्ड मात्रै लगेको छ । यस सम्बन्धमा अनुसन्धान हुने प्रहरीले बताएको छ ।
श्रोतका अनुसार केहि व्यक्ति प्रशासनको ढोका फोडेको १५ गते दिउँसो दुई घण्टासम्म त्यहाँ डुलिरहेका थिए । उनीहरु क्रान्तिकारी समर्थित रहेको ठम्याएको प्रहरी श्रोतको भनाई छ । त्यसबेलादेखि नै उनीहरुको गतिविधि नियालिरहेको श्रोतले बतायो ।
पश्चिमाञ्चलकै ठूलो पृथ्वीनारायण क्याम्पसमा यही कार्ड हराएको विषय छानविनका कारण फेरि चुनावको कार्यतालिका प्रभावित हुने देखिएको छ । आईतबारदेखि नै क्याम्पसमा तालाबन्दीको कारण तनाव थियो । यस विषयमा पूर्व क्याम्पस प्रमुख प्रा.डा. दिलबहादुर क्षेत्रीको संयोजकत्वमा छानविन समिति नै बनेको थियो । सो समस्या समाधान समितिले सोमबार बैठक समेत डाकेकोमा निश्कर्षमा पुग्न सकेन र निर्वाचन कार्यतालिका प्रभावित बन्यो । क्याम्पस प्रशासनले मंगलबार सूचना जारी गर्दै चुनाव स्थगित भएको जनायो । बुधबार फेरि सहमति भएपछि क्याम्पस प्रमुख प्रा. डा. देवेन्द्रबहादुर लामिछानेले फागुन २५ गतेलाई चुनावको अर्को मिति तोके । नेकपा एमाले समर्थित अनेरास्ववियूले भने जुनसुकै हालतमा निर्वाचन हुनुपर्ने जनाउँदै आएको थियो ।
अनेरास्ववियूका क्याम्पस कमिटि संयोजक राजन शर्मा पराजुलीले विज्ञप्ती मार्फत नै अखिल क्रान्तिकारीले आफूले लज्जाजनक हार व्यहोर्ने निश्चित भएपछि निर्वाचन तालिकालाई प्रभावित पार्ने गरी यो हर्कत गरेको आरोप लगाएका थिए । उनले विज्ञप्तीमार्फत ‘काँक्रो आफू चोरेर खाने र बियाँ अरुको मुखमा टाँस्न खोज्ने” अखिल क्रान्तिकारीको दोहोरो चरित्रको निन्दा गरेका थिए ।
नेवि संघ केन्द्रिय सदस्य भानु ढकालले पृथ्वीनारायण क्याम्पसमा पनि यही २५ गते हुने भनिएको निर्वाचन विरुद्ध आठ विद्यार्थी संगठन रहेको जानकारी दिए । पृथ्वीनारायण क्याम्पस प्रमुखले कसैसँग छलफल नगरी निर्वाचन मिति घोषणा गरेको उनको भनाई छ । तर, पृथ्वीनारायण क्याम्पसमा फागुन १८ गते चुनाव रोकिएको अखिल क्रान्तिकारीको तालाबन्दीले हो । उसले भने सहमति जनाईसकेको छ ।
यी न्युजहरु पनि पढ्नुहोस् :
स्ववियु चुनावमा होमिए विद्यार्थी, यस्तो छ कास्कीका ६ क्याम्पसमा रौनक
पिएनमा चुनाव रोके क्रान्तिकारीले, अनेरास्ववियुको आपत्ति, पाँच क्याम्पसमा हुने
पोखराको स्ववियु चुनाव: जनप्रिय, संस्कृत र नर्सिङमा नेविसंघ, बनमा अनेरास्ववियु
ईञ्जिनियरिङमा नेवि संघ र क्रान्तिकारीद्वारा मतगणनामा अवरोध